mashiinada beeraha - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda mashiinada beeraha
Calaamadda: mashiinada beeraha
Soosaarayaasha beeraha ee gobolka Arkhangelsk ayaa magdhow u ah kharashyada qalabka
Beeralayda gobolka Arkhangelsk waxay magdhow siin karaan ilaa 40 boqolkiiba kharashka iibsashada qalabka beeraha, adeegga saxaafadda ee guddoomiyaha gobolka iyo dawladda ee gobolka Arkhangelsk. Tallaabooyinka...
Beeralayda baradhada iyo beeralayda khudaarta ee Territory Krasnoyarsk ayaa magdhow ka bixinaya qayb ka mid ah kharashka iibka qalabka.
Sannadkan, in ka badan 1,3 bilyan rubles ayaa la bixiyaa dayactirka farsamada iyo tignoolajiyada ee dhismaha-warshadaha ee miisaaniyadda gobolka, kaas oo ...
AGROSALON, oo ah bandhiga ugu weyn ee mashiinada beeraha iyo qalabka Russia, ayaa bilaabay ficil aan horay loo arag! Laga bilaabo Agoosto 20 ilaa Sebtember 1, iska qor goobta ...
Bandhigga ugu weyn ee mashiinnada beeraha iyo qalabka beeraha ee Ruushka ayaa si ballaaran u soo bandhigi doona guulaha ugu wanaagsan ee mashiinnada beeraha shisheeye iyo kuwa gudaha. Waxyaabaha cusub, barashada baradhada waxay awoodi doonaan inay ...
Madaxweynaha midowga reer warshadaha iyo ganacsatada: "Waan hubaa in YUGAGRO lagu qaban doono heer dhaqan ahaan aad u sareeya"
Madaxweynaha Midowga Midowga Warshadaha iyo Ganacsatada Alexander Nikolaevich Shokhin ayaa salaan u diray ka soo qeyb galayaasha iyo booqdayaasha Bandhigga Caalamiga ee 27aad, kan ugu weyn Ruushka ...
Bishii Juun 10, kulan ay yeesheen guddiga bandhigga ee bandhigga gaarka ah ee caalamiga ah ee mashiinnada beeraha AGROSALON ayaa lagu qabtay magaalada Moscow. Qaab videoconference ah, xubnaha guddiga bandhigga iyo ...
562 milyan rubles ayaa ku maalgeliyay cusboonaysiinta dhismaha agro-warshadaha Udmurtia
Ilaa bilowgii sanadka, 562 milyan oo rubles ayaa loo qoondeeyay cusboonaysiinta mashiinka iyo taraafikada taraafikada ee Udmurtia. Wasaaradda Beeraha ee Udmurtia ayaa ku warrantay in xilligan ...
188 milyan oo rubles ayaa ay ka heleen beeralayda Nizhny Novgorod miisaaniyadda gobolka ee dib loogu cusbooneysiinayo mashiinnada beeraha
“Dhismaha agro-warshadaha ee gobolka Nizhny Novgorod wuxuu muujiyaa heerar sare oo horumar ah. Wax soo saarka Beeraha ayaa sanad walba koraya - marka loo eego natiijooyinka 2019, wax soo saarka beeraha ...